Firefox is Released ! — MYSTERY ZILLION
Firefox is Released !
June 2011 edited June 2011 in Tech News
june 21 ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာ Mozila Coporation ဟာ Firefox Web Browser ရဲ့ version 5.0 ကို released လုပ်သွားပါတယ်။ 21 ရက်နေ့နေခင်းပိုင်းလောက်မှ ဒေါင်းလော့လုပ်ယူ ခွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သတင်း အချက် အလက် ယိုစိမ့်မှုကြောင့် တော်တော်များများက ဒေါင်းပြီးတော့ စမ်းနေကြပါပြီ။ ဘာထူးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သေချာမစမ်းရသေးပါဘူး။ လက်တလော တခြားကွန်ပျုတာ တစ်လုံးမှာ စမ်းသွင်းကြည့်တာအရပြောရရင်တော့ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့သိပ်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ တကယ်တမ်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ စမ်းကြည့်နေရင်းမှသိမှာပါ။ ကျွန်တော်တကယ်သုံးတဲ့ တစ်လုံးပေါ်မှာတော့ စမ်းကြည့်ရင်ပိုသိနိုင်မှာပါ။ သိုသော် plugin တွေ extension တွေအသစ်ထွက်ဦးမှာမဟုတ်သေးတော့ လောလောလတ်လတ်တော့မသုံးပါသေးဘူး ။ Firefox 5.0 ဟာ FireFox 4.0 အပြီး 12 ပတ်အတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Browser တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက tech blog တွေအဆိုအရတော့ HTML5 ကိုပိုမိုထောက်ပံပေးထားပြီး 4.0 ကထက်စာရင် Bugs တွေနည်းသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ Filehippo မှာတော့ လင့်တွေပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ <a href="http://www.filehippo.com/download_firefox/">ဒီမှာ</a>ပါ။ Mozila Foundation မှာတော့ လတ်တလော ဒေါင်းလော့လင့်မတွေ့သေးပါဘူး
It's faster and lighter than 4.01 I think.
There is no freeze with this version.
And It's working very well with FoxyProxy 2.0.1(updated June 16,2011).